Uru Omume nke ndị ọbịa | Martech Zone
Uru Omume nke Ọbịa
Anyị ji ọtụtụ ihe atụ nchịkọta, ma anyị anaghị etinyekarị uru na omume ọ bụla onye ọbịa na-eme mgbe ha kpọtụrụ anyị na ntanetị. Ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ na-elebara anya karịa nleta na ntụgharị… enwere mmekọrịta dị n'etiti na mgbe emechara ya.
Na eserese dị n'elu enwere m ahịrị abụọ… mmetụta na uru. Dị ka ndị ọbịa dị ka, retweet, fan na -eso gị ma ọ bụ azụmahịa gị… enwere mmetụta, ọ bụghị naanị n'ihi na onye ọbịa ahụ nwere ike ịbịaru nso na ịzụrụ ihe, kama ọ bụ n'ihi na ha buliri ebumnuche ha na nkwado ha na netwọkụ ha. Ha nwere ike ọ bụghị ọbụna zụọ, mana ọ bụrụ na ha nwere ọtụtụ mmetụta, mmetụta ha nwere ike ịmanye ọtụtụ ndị ọzọ ịzụrụ.
Omume ndị ọzọ ndị ọbịa gị na-eme bara uru… na -denye email ma ọ bụ RSS, webinar, na-akpọ ngalaba ahịa gị. Ulo oru ndi nwere ihe ndi akpachara anya na-eche banyere ndi na-ere ahia ma hapu ugwo ahia ha ghotara otu uzo ahu si baa uru. Ebe ọ bụ na ha dị nso ịzụta ihe, ọ nwere ike bụrụ na ha chọrọ obere nrụgide ma ọ bụ ncheta… ma ọ bụ ọbụna oge ịchekwa ego dị mkpa iji zụta.
Mgbe ịzụta ma ọ bụ mmeghari ahụ n'ezie, enwere omume ndị ọzọ na-eme ka mmetụta nke ire ere ahụ dịkwuo elu - nkwado na nkwenye nke ngwaahịa ndị a zụrụ. Kpụrụ nwere mmetụta siri ike na ma atụmanya na-azụta ma ọ bụ na ọ bụghị. Nkwado onwe onye ma ọ bụ nyochaa nke ngwaahịa ahụ dị arọ karịa.
Ka ị na-akpa nkata atụmatụ ịntanetị gị, kpachara anya soro ihe ọ bụla onye ọbịa ga-eme. Nye mkparịta ụka na mkpọsa ịkpọgharịa iji mee ka ha si n'otu omume gaa na nke ọzọ nke ọma. Ihe niile bụ na mgbe niile na atụmanya na-ahapụ saịtị gị ma ị tufuo ọrịre n'ihi na amatabeghị etu ha si si n'otu ihe gaa na nke ọzọ na saịtị gị. Nye ụzọ doro anya maka ndị ọbịa gị ka ha soro gị. Nye ọtụtụ ụzọ maka nsonaazụ kacha mma.
Tags: uruọrụ ndị ọbịaomume obiauru onye obia